မျက်နှာဖုံးစွပ်ထား တဲ့ ၁၅ နှစ် အရွယ် သား ကို ဖခင် က မှားယွင်းပြစ်သတ် | Freedom News Group
မျက်နှာဖုံးစွပ်ထား တဲ့ ၁၅ နှစ် အရွယ် သား ကို ဖခင် က မှားယွင်းပြစ်သတ်
by FNG on September 29, 2012	အိမ်နီးချင်း က ဓားပြ အိမ်နားကပ် တယ် ဆိုတာကြောင့် ငါးတန်းကျောင်းသား များ ကို စာသင်ပေး
နေသည့် နာမည် ရ ကျောင်းဆရာ ဖခင် က အသက် ၁၅ နှစ အရွယ် အထက်တန်း ကျောင်းသား
ဖြစ်သည့် သား ဖြစ်သူ ကို သေနတ် ဖြင့် ပြစ်သတ်မှု အမေရိကန် နိုင်ငံ ကွန်နက်တီကတ် ပြည်နယ်
နယူး ဖယ်ဖီး တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည်။
နှင်းလျှောစီးရာ တွင် အသုံးပြုသည့် မျက်နှာဖုံး အနက် ၀တ်ဆင်ထားသည့် သား ဖြစ်သူ သည်
အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ အဒေါ် ၏ အိမ်သို့အနက်ရောင် အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင် ပြီး လက်ထဲ တွင်
ဓားငယ် တစ်ချောင်း ကိုင်ဆောင်ကာ ကြာသပတေး နေ့ နံနက် ၁ နာရီ တွင် ၀င် သွား ခဲ့သည်။
ညီမဖြစ် သူက အိမ်နီးချင်း အကို ဖြစ်သူ Jeffrey Giuliano ကို အကူ အညီတောင်းရာမှ ဂျက်
ဖရီ က အိမ် တွင်းရှိ သေနတ် ကို ယူပြီး မျက်နှာ ဖုံးစွပ် ရုပ်ဖျက် ထားသည့် သား ကို ပစ်သတ်
ရဲတပ် ဖွဲ့ရောက်လာ ချိန် တွင် မျက်နှာဖုံး ချွတ်ကြည့် မှ သေနတ် နှင့် ပစ်လိုက် သောကြောင့် သေ
ဆုံးသူ သည် သူ ၏ သား ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရသည် ဆိုသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က တိုင်လာ ဂီလီယာနို သေဆုံးမှု အတွက် ဖခင် ဖြစ်သူ ကို ရာဇ၀တ် ကြောင်း အရ ဖမ်း
ဆီးခြင်း မရှိ ဟု သိရသည်။
ကွန်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ရဲမင်းကြီး က ” တိုင်လာ က ကျီစား လို တဲ့ သဘောနဲ့အဒေါ်ရဲ့အိမ်
ထဲ ၀င်ဖို့ ကြိုးစား တာလား ၊ ဖောက်ထွင်းဖို့ဝင်ရောက်တာ လား ၊ သူ့ အဖေကရော သား ဖြစ်သူ
မှန်း သိလျှက် နဲ့တမင် ပြစ်လိုက်တာ လား ဆိုတာ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မသိရ သေးဘူး ဟု ပြော
ဖယ်ဖီး မြို့ကလေး က မူ ကြေကွဲ ဖွယ် အဖြစ် အပျက် အတွက် ပူဆွေး မဆုံး ဖြစ်နေကြသည်။
The neighbor, who is the teen’s aunt, was alone in her house and believed someone was breaking in. She called the teen’s father, who lives next door. He grabbedagun, went outside, confronted someone wearingablack ski mask and black clothing and fired when the person went at him withashiny weapon in his hand, police said.
U.S. man shoots-dead teen in ski-mask outside neighbour’s home, learns it’s his own son (news.nationalpost.com)
Man kills masked intruder, discovers it’s his son (nj.com)
Masked Conn. teen shot, killed by dad (kshb.com)
From: ပြည်ပသတင်း	← ၁၁၂ ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်လှည့် လည် အပူဇော်ခံပွဲ စည်ကားသိုက်မြိုက် စွာ ကျင်းပ
ဧ၀ရက် တောင်တက်မယ့် ကမ္ဘာ လှည့် တွေ လေယာဉ် ပျက်ကျ လို့ သေ →
အကျီဆာ သန်တော့ ခက်ပြီပေါ့ကွယ်
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,556,858 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar releases 41 political prisonersMyanmar's surreal capital now less ofaghost townMyanmar frees 44 political prisonersSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partyMyanmar releases 44 prisoners of conscienceICRC advising police in MyanmarMyanmar's President Pardons Political PrisonersMyanmar businesses call for better deal from ChinaWant Burma info in your inbox each morning?